ukuvelisa ukutya kwemfuyo yenkukhu,isilwanyana esitya ukutya
1.Umgca wokutya kwezilwanyana useti olupheleleyo loomatshini abasetyenziselwa ukwenza i-pellets zokondla.
2.Umthamo wale mveliso yokutya kokutya kweenkukhu unokuvela 1 iitoni ngeyure nganye 10 iitoni ngeyure.
3.Apha, ungafumana isityalo esithile sokondla izilwanyana eziziindidi ezahlukeneyo,kubandakanya inkukhu,iinkomo,igusha,yehagu,idada,umvundla, kwaye nangokunjalo.
Umgca wokutya kwezilwanyana useti olupheleleyo loomatshini abasetyenziselwa ukwenza i-pellets zokondla. Umthamo wale ndawo yokuvelisa ukutya kweenkukhu ezinokuqala ukusuka ku 1ton ngeyure ukuya kwi-10tons ngeyure. Isityalo sokuvelisa ukutya kwemfuyo ngokubanzi kubandakanya le nkqubo ilandelayo: Izinto eziluhlaza ezamkelweyo kunye nenkqubo yokucoca, Inkqubo yokutyumza, inkqubo yokuxuba, Inkqubo yokwenza i-pellet, Inkqubo yokupholisa i-pellet, (Inkqubo yokuqhekezwa kwepellet), Inkqubo yokuhluza.
isicelo selayini yenkuku yokutya: isetyenziswa kwizityalo ezikhulu zembewu yokutyisa / umzi mveliso / umzi mveliso wokulima; Umgca wemveliso yokugaya ukutya okufanelekileyo kunye nokuveliswa okuphezulu kokutya kwemveliso, umxube, ipellet mill, kupholile,crumbler,kupholile kwaye yonke imigqomo, isikrini,Ukupakisha oomatshini bokuhambisa izinto njl njl .Siza kuyila itshathi epheleleyo yokuhamba komgca we-pellet ngokwezixhobo zakho zokwenza izinto kunye neemfuno ezithile.
Malunga nendawo yethu yokuvelisa ukutya kwenkukhu
1.Imveliso yethu yokuvelisa ukutya kwenkukhu inomda osetyenziswayo ngokubanzi Inokuqhubekekisa izinto ezahlukeneyo ezifana nombona, umbona, ingca, amabele, I-SBM, MBM, alfalfa, mol mol, umququ, kunye nezinye izinto eziluhlaza.
2.Inkqubo egcweleyo yokutya kwepellet yezilwanyana Ukuveliswa kwezityalo kwimveliso yezilwanyana kunezifo zokucoca kunye nokucoca, Ukugaya, Ukubetha kunye nokuxuba, ukuthambisa,ukupholisa,ukugoba ,Ukukhangela kunye nokupakisha iipellets.
3.Umgangatho ofanelekileyo wokutya okugqityiweyo Ipellethi yensimbi engenasici yandisa imeko kunye nexesha lokupheka. I-Axial isitya sokutshiza, ukuphucula ukusebenza kokupheka okuphekiweyo.
4.Indawo yokutyisa izilwanyana ineemishini ezisebenzayo zokugcina ukutya zineematshini ezisebenza ngokuphezulu okuphezulu okuqhuba okuphezulu kunye nomkhonkwane we-pinion., kukhokelela ekubeni uqhube kakuhle, ingxolo ephantsi kunye nobomi benkonzo ende.
5.Amandla obuGcisa: Singakwazi ukwenza ngokwezifiso amandla ahlukeneyo ukusuka 1 iitoni ngeyure nganye 50 iitoni ngeyure okanye nangaphezulu.
6.Iindidi ezahlukeneyo kunye nobungakanani bokutya Singakwazi ukwenza ngokwezifiso isisombululo sokuvelisa isidlo se-mash, ukutya kwepellet, ukutya oku crumble ngawe. Ubungakanani bokutya kwe-pellet kunokuba yi-1.5mm ukuya kwi-18mm.
Ukucwangcisa ukwakha imveliso yokutya kweepelethi?Sinokutya okunokuthenjwa kweenkukhu ezinokuthenjwa kunye neminyaka yamava onokubonelela ngqo ngale nto uyifunayo! Apha, ungafumana isityalo esithile sokondla izilwanyana eziziindidi ezahlukeneyo, kubandakanya neenkomo,inkukhu,igusha,yehagu,idada,umvundla, kwaye nangokunjalo.
Ngaphezu koko, ukulungiselela iimfuno ezizodwa zabaxumi bethu, sinakho ukwenza ngokwezifiso umda wokuveliswa kweepellethi zeenkukhu,singanikeza umtya wokuvelisa ukutya kweenkukhu nge-1-2t / h,2-3h / h,3-5h / h,6-8h / h,kunye ne-8-10t / h,okanye wenze ngokwezifiso umthamo wemveliso ngokweemfuno zakho.
Ividiyo yenkuku yokutya kwepellet yokutya